Darpan Nepal – चक्र सुनारको दिलको दरबारमा शंकर बि.सि. र नुना आर्यानको धमाकेदारअभिनयमा रहेको जेष्ठ४मा सार्वजनिक हुदै
चक्र सुनारको दिलको दरबारमा शंकर बि.सि. र नुना आर्यानको धमाकेदारअभिनयमा रहेको जेष्ठ४मा सार्वजनिक हुदै
गीत संगीतले कहिले रुहाउछ त कहिले हसाउछ कहिले तोलाउने गराउछ त कहिले नचाउछ। गीत संगीत औषधिको रुपमा लिने दुर्गा बिरहिले हजारौं गीत आफ्नै रचनामा तयारी गर्नु भएको छ। अझै यो पछिल्लो समयमा गाउँ बेसि भञ्ज्याङ् देखि बजारमा सहर देश बिदेश सम्म पनि गीत संगीतको माग बढेको पाइन्छ । दुर्गा बिरही बहुप्रतिभाको धनी भनेर चिनिनु हुन्छ । बिरहीले आफै शब्द,लय,स्वर त आफै गर्नु हुन्छ भने मोडेल र निर्देशन पनि आफै गर्नु हुन्छ ।
बिरहीले गरेको गीत भिडियो उत्कृष्ट हुन्छ।यसै क्रममा नव प्रतिभा गायक चक्र सुनार लाई गीत संगीत छेत्रमा प्रवेश गराउनु हुने दुर्गा बिरहीले मिलन हुँदा सुहागरात र भेट भयो आज भन्ने गीत बिरहीको आफ्नै शब्दमा रहेको छ ।
चक्र सुनारले बिरहीको हरेक गीत मन पराउदै हेर्दै आएको र बिरही कै गीत बाट संगीत यात्रा सुरुवात गरेको पाइन्छ । चक्र सुनार लाई बिरहीको ठुलो साथ रहेको छ। गीत संगीतको छेत्र बाट र अहिले पनि बिरही कै लय/शब्दमा दिलको दरबार गीत भिडियो लिएर आउदै हुनुहुन्छ चक्र सुनार ।
दिलको दरबार गीत मा दुर्गा बिरहीको लय/शब्द छ भने स्वर चक्र सुनार र चर्चित गायिका जमुना सनमको रहेको छ ।यो गीतमा बिस्वास नेपालले एरेन्ज गर्नु भएको हो भने यो गीत मार्मिक रेकर्डिङ स्टुडियोमा भएको हो । यो गीत को छायांकन काठमाडौंको रमाइलो ठाँउ पार्क हुँदै गरिएको छ । जस मा डान्सर शंकर बि.सि. र नुना आर्यानले अभिनय गर्नु भएको छ।
छायाकार दुर्गा पौडेलले गर्नु भएको छ ।सम्पादन नवीन घर्ती मगर ले गर्नु भएको छ भने निर्देशन शंकर बि.सि. आफैले गर्नु भएको छ।गीत संगीतले कहिले रुहाउछ त कहिले हसाउछ कहिले तोलाउने गराउछ त कहिले नचाउछ। गीत संगीत औषधिको रुपमा लिने दुर्गा बिरहिले हजारौं गीत आफ्नै रचनामा तयारी गर्नु भएको छ। अझै यो पछिल्लो समयमा गाउँ बेसि भञ्ज्याङ् देखि बजारमा सहर देश बिदेश सम्म पनि गीत संगीतको माग बढेको पाइन्छ । दुर्गा बिरही बहुप्रतिभाको धनी भनेर चिनिनु हुन्छ । बिरहीले आफै शब्द,लय,स्वर त आफै गर्नु हुन्छ भने मोडेल र निर्देशन पनि आफै गर्नु हुन्छ ।
बिरहीले गरेको गीत भिडियो उत्कृष्ट हुन्छ। यसै क्रममा नव प्रतिभा गायक चक्र सुनार लाई गीत संगीत छेत्रमा प्रवेश गराउनु हुने दुर्गा बिरहीले मिलन हुँदा सुहागरात र भेट भयो आज भन्ने गीत बिरहीको आफ्नै शब्दमा रहेको छ । चक्र सुनारले बिरहीको हरेक गीत मन पराउदै हेर्दै आएको र बिरही कै गीत बाट संगीत यात्रा सुरुवात गरेको पाइन्छ । चक्र सुनार लाई बिरहीको ठुलो साथ रहेको छ। गीत संगीतको छेत्र बाट र अहिले पनि बिरही कै लय/शब्दमा दिलको दरबार गीत भिडियो लिएर आउदै हुनुहुन्छ चक्र सुनार ।
दिलको दरबार गीत मा दुर्गा बिरहीको लय/शब्द छ भने स्वर चक्र सुनार र चर्चित गायिका जमुना सनमको रहेको छ । यो गीतमा बिस्वास नेपालले एरेन्ज गर्नु भएको हो भने यो गीत मार्मिक रेकर्डिङ स्टुडियोमा भएको हो । यो गीत को छायांकन काठमाडौंको रमाइलो ठाँउ पार्क हुँदै गरिएको छ । जस मा डान्सर शंकर बि.सि. र नुना आर्यानले अभिनय गर्नु भएको छ। भने छायाकार दुर्गा पौडेल ले गर्नु भएको छ ।
सम्पादन नवीन घर्ती मगर ले गर्नु भएको छ भने निर्देशन शंकर बि.सि. आफैले गर्नु भएको छ । यो अत्यन्तै रमाइलो गीत भिडियो पछिल्लो समयमा निरन्तर काम गर्दै आएको नया लाई विशेष प्राथमिक दिदै आएको र चर्चित कलाकार लाई विशेष सम्मान गर्दै आएको 1 मात्र कम्पनी आत्म विस्वाश फिल्मस् प्रा.लि. बाट जेष्ठ4गते शुक्रबारको दिन तपाई हाम्रो बजारमा आउदैछ। यो अत्यन्तै रमाइलो गीत भिडियो पछिल्लो समयमा निरन्तर काम गर्दै आएको नया लाई विशेष प्राथमिक दिदै आएको कम्पनी आत्म विस्वाश फिल्मस् प्रा.लि. बाट जेष्ठ ४ गते शुक्रबारको दिन तपाई हाम्रो बजारमा आउने भएको छ ।
Previous Post Next Postपुस्कर र मेनुकाको"आँखाको नानीमा" सार्वजनिक हेर्नुहोस् भिडियो